Aziz Kocaoglu Taariikh Saxiixeeda Izmir | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYTurkish Aegean35 IzmirAziz Kocaoglu, taariikhda Izmir ayaa saxiixay
Aziz Kocaoglu, taariikhda Izmir ayaa saxiixay
02 / 10 / 2018 35 Izmir, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Nidaamyada Tire Wheels, Metro, TURKEY, taraamka
Duqa Magaalada Magaalada Izmir Aziz Kocaoglu ayaa ku dhawaaqay inuusan ka qeyb geleynin doorashada dhamaadka bisha Maarso. Markii la aasaasay "İzmir Model Başkan" ku saleysan horumarka, Duqa Kocaoğlu wuxuu kordhiyay maalgashiga degmooyinka by 14.5 times and 28 times by train. Carwada, oo ay taageerto Dowladda Hoose ee Magaalada, ayaa sameeyay qarax; Izmir halka beeraha koray jeer 16 ka badan celceliska ah ee Turkey.
Iyada oo maalgashiyada iyo mashaariicda ay xaqiiqsadeen İzmir Caasimad-hoose ee hoos taga maamulka Aziz Kocaoğlu tan iyo 2004, isbadal taariikhi ah ayaa ka dhacay magaalada. İzmir waxay heshay kaabayaal adag oo gaadiid ilaa deegaanka ah, laga bilaabo xarumaha bulshada iyo isboortiga ilaa xarumaha farshaxanka. İzmir, oo ka koray celceliska celceliska qaran ee waaxyo badan oo dhaqaalaha ah, gaar ahaan beeraha iyo carwooyinka ganacsiga, ayaa galay xaalad cusub. Waxqabadka Duqa Kocaoğlu ujeedadiisu tahay horumarinta kalkınma ee deegaanka maxalliga ah waxaa loo wareejiyay suugaanta dowladda hoose ee “İzmir Model .. Marka mid ka mid ah degmada ugu cafinnaa Turkey ee Izmir degmada Metropolitan, Turkey ayaa maanta ugu awooda badan, waxa uu noqday mid ka mid ah hay'adda ugu kalsoon tahay Turkey ee la maal-sinaanta. Dhaqaalaha 'mzmir', oo sanado badan socanayay, ayaa dib u soo noolaaday muddadan.
İzmir wuxuu mar kale noqday xarunta soo jiidashada
Xariiqda mitirka oo ka bilaabaysa Üçyol ilaa Üçkuyular, Nidaamka 136 km magaalada, Konak iyo Karşıyaka Gawaarida Taranka, Izmir Life Life Park, Ahmed Adnan Saygun Art Center, Fair Izmir, Izmir Social Life Campus, International Ice Sports Hall, Bornova Doganlar Stadium, Tiyaatarka Tiyaarka, Xarunta Dhaqanka Gaaska Taariikhda Gaaska, tobaneeyo kun oo waaweyn ayaa la keenay magaalada. Gaar ahaan beeraha iyo ganacsiga carwooyinka, oo ay ku jiraan dhaqaalaha koraya ka sarreeyaa celceliska qaranka ee qaab qaybaha badan ee Izmir, "magaalada ugu noolaan karo" Turkiga ee ahaa. Istanbul, oo loo yaqaan "dhagax, car, dahab,,, ayaa bilaabay inuu u haajiro İzmir. Sanadkii la soo dhaafay, 17, oo inta badan ay maamulaan maamulayaasha da 'dhexe iyo shaqaalaha cadaanka ah, ayaa u haajiray Izmir in kabadan kun kun Istanbul. İzmir, oo ah halka shaqaallaha tacliinta leh ay muujinayaan xiisaha kordhaya, waxay sidoo kale noqotay xarun soo jiidasho leh maalgashiyada cusub ee shirkadaha waaweyn ee fadhigoodu yahay Istanbul.
Calaamadaha ugu horreeya ee soo nooleynta Izmir waxay ka yimaadeen dibedda. 2012 oo ay soo saartay Machadka Brookings waa midka ugu dhaqsaha badan 4 dhaqaalaha adduunka. Izmir waxaa loo muujiyay inuu yahay magaalada 2014 sanadka 2. kacay safka.
Nidaamyada tareenka 16 ayaa soo kordhay waqtiyo
Horumarinta goobaha gaadiidka dadweynaha, tareenada oo magaaladii ku wareegsan, maraakiibta cusboonaaday iyo bas ugu horeysay Turkey ee korontada ee Izmir la raxan ka mid ah tayada noloshaada soo hagaagtay. Shabakadda nidaamka xaddidan ee xaddidan oo leh xaddiga metrooga 11 km ayaa kor u kacday in ka badan 16 km xilligan.
Metro: Wadarta saldhigyada 17 iyo wadada '19 km' waxaa lagu gaarey İzmir Metro iyada oo saldhigyada la dhammeystirey loona xilsaaray. Mid ka mid ah dhammaadka xariiqda metrooga ayaa loo fidiyay Jaamacadda Ege iyo Evka 3 halka dhamaadka kalena loo gudbiyey Üçkuyular. Aasaaskii loo yaqaan '7,2 km Narl Metrodere Metro' ayaa la dhigay shaqooyinkuna way socdaan. Ansixinta kadib Ankara, nidaamka qandaraaska iyo dhismaha waxay ku bilaaban doonaan gudaha dhulka hoostiisa ee Buca.
İZBAN: Menderes in line Turkey ee rakaabka dheer galay adeega sannaddii 2010 80 km la Aliaga. Nidaamka Suburban ee İzmir İZBAN, oo la xaqiiqsaday in lala kaashanayo TCDD iyo İzmir Metropolitan Municipal, ayaa markii ugu horraysay loo ballaariyey Torbalı. Kadib, qaybta 26 km ee u dhaxaysa Tepeköy iyo Selçuk ayaa la furay. Qadka 'BZBAN wuxuu gaadhay 136 km iyadoo ay ka soo qeybgaleen Xarunta Selçuk Station. Khadadka İZBAN, oo lagu dhex daray Nidaamka Suburban İzmir, wuxuu kusii fidin doonaa 52 km dheeraad ah Bergama ee waqooyiga wuxuuna la shaqeyn doonaa saldhigga 8.
Tiram: Laga soo bilaabo 2017, wareegga taraamka ayaa mar labaad ka bilaabmay Izmir. Karşıyaka Tram, 8.8 kiiloomitir wadada u dhaxaysa Iskele-Mavisehir oo leh xayndaabyada 14, Konak Tram, F.Altay Square - Halkapınar 12.8 kiiloomitir, 19 ayaa joogsanaya.
Markabka 15 Cruise Ship, 3 Rakaabka Rakaabka
Ujeedada safarka rakaabka waxaa lagu xaqiijiyey maraakiib deg deg ah oo raaxo leh oo lagu soo saaray teknolojiyaddii ugu dambeysay gacanka Izmir. Qaybtii ugu horreysay ee ka kooban kaarboonka xNUMX maraakiibta rakaabka ee dalka, oo si gaar ah loo naqshadeeyay loona soo saaray baaxadda 'Mashruuca Horumarinta Gaadiidka Badda ğ ee ay hirgalisay Degmooyinka Izmir Metropolitan, ayaa la geeyay. Markii doomaha gawaarida ee 15 ay soo saartey baaxadan sidoo kale waxaa lagu daray, celcelis ahaan da'da duulimaadka cusub ee 3 oo ay leedahay Dowlada Hoose ayaa hoos ugu dhacday 18. Markaa, İzmir wuxuu leeyahay arasında doonyaha ugu da 'yar ee ka dhex jira maamullada maxalliga ah ee bixiya adeegyada gaadiidka dadweynaha ee Badda Mediterranean-ka. Metropolitan 1 ayaa sidoo kale laga xaraashtay si ay u iibsato doonyo baabuur cusub.
Maraakiibtan bas koronto ugu horeysay Turkiga
Baska korontada ee 20 ee ugu horreeya, oo deegaanka u fiican iyo dhaqaala ahaan, ayaa soo saaray gebi ahaanba tikniyoolajiyadda gudaha, duulimaadyada bilawga ah.
Nidaamka Gaadiidka Xeeladeed
Nidaamka maaraynta taraafikada ee laga hirgaliyay magaalooyinka waa weyn ee adduunka ayaa laga aasaasay magaalada İzmir. Iyada oo la raacayo nidaamka cusub, isgoysyada iyo baarkinada 10 in kabadan kun aaladood oo caqli badan, 402 smart isgoyska, 110 trailer camera, Nidaamka cabirka taraafikada 201, Nidaamka xadgudubyada nalka casaanka 47, Nidaamka xadgudubyada gawaarida gawaarida '151', wadada xawaaraha xawaaraha ee 114, Wadada 9 gabari control Nidaamka waxaa lagu maareeyaa tikniyoolajiyad horumarsan.
Xerada Nolosha Bulshada
Iyada oo ay le'eg tahay iyo qaababka ugu horeysay ee Campus Turkey Izmir Life Social uu la geeyey adeeg ee 2016. Xarunta weyn ee Buca, oo ah maalgelinta ugu weyn ee Izmir Metropolitan Municipal marka loo eego dhaqanka degmada bulshada, waxaa lagu dhisay aag ah 65 kun m². Xarunta nolosha bulshada waxay leedahay guri xanaano, jikada maraqa, qolka jimicsiga iyo barkadda dabaasha, xarunta caruurta iyo dhalinyarada, xarunta naafada, xarunta dhaqan celinta.
Ganacsiga adag ugu qalma Turkey ee cadaalad Izmir, Izmir degmada Metropolitan la 337 kun oo mitir oo laba jibbaaran oo ah taallo kibirka, waxay ahayd ugu weyn ee Turkiga. Dhismaha carwada 'İzmir' wuxuu saameyn ku yeeshay horumarka magaalada cadaalada. Tirada soo bandhigayaasha carwooyinka ugu muhiimsan ayaa kordhay si aad ah ayey ugu mahadcelinayaan Fair İzmir, oo ay garwaaqsadeen Dawladda Hoose iyadoo adeegsanaysa ilaha ay ku kacayso qiimaha 600 milyan ginni. Olivtech & Ecology Izmir, boqolkiiba 161, Shoexpo 52 boqolkiiba, Travel Turkey 16 boqolkiiba, HADDII Arooska 16 boqolkiiba kordhay wajiyadaha, Marble ayaa jabisay rikoorkeeda iyada oo kordhineysa tirada booqdayaasha 44.
Beerta Duurjoogta ee Izmir
Turkey ee park duur ugu horeysay ee 2008 425 kun oo mitir oo laba jibbaaran la keenay magaalada by Izmir degmada Metropolitan galay. Maanta kun oo martida ka magaalooyin badan ee Turkey this xarun aad u gaarka ah meesha xayawaanka duurjoogta ah u timaadeen inaad aragtaan noocyada 130 1500 badbaadaan in ay Habitat dabiiciga ah.
Ahmed Adnan Saygun Xarunta Farshaxanka
Dowlada hoose ee İzmir waxay u isticmaashay ilaha magaalada faa iidada ugu jirta muwadiniinta iyagoo leh bulshada guud ee yönetim, ee aan kireysanayn ”qaab ku jihaysan. In qiime in Izmir, mid ka mid ah xarumaha tahay aqoon ugu Turkiga, Ahmed Adnan Saygun Xarunta Farshaxanka. Izmir degmada Metropolitan, "opera gaarka ah ee Turkey" dabamariyay aasaaska Mavisehir dhismaha ugu horeysay.
A Reck Veysel Aagga Madadaalada iyo Hoolka Ciyaaraha Caalamiga ee Barafka
Bornova Asik Veysel Recreation Area la aasaasay gudahood Turkey ee ugu casrisan Ice Sports Hall la 5 kun oo kursiga lagu dheelo. Dadka dhalinyarada ah iyo carruurta ka soo jeeda İzmir waxaa lagu soo bandhigaa isboorti sida barafka barafka lagu ciyaaro iyo hockey barafka hoolka heerarka casriga ah. Ciyaartoyda horyaalnimada ayaa ku koray hoolkan.
Dhirta Gaaska Taariikhda
Halkii loo rogi lahaa kiro, waa maalgashi kale oo taariikhi ah oo lasiiyay dadka reer offeredzmir lehna garasho kacsanaan leh. Alsancak, oo ay dib u soo celisay İzmir Metropolitan Municipal oo loo beddelay xarun dhaqameed 2008, Warshadda Gaaska wuxuu bilaabay inuu ka dhaco nolosha magaalada oo ah barta soo jiidashada mar labaad.
Garoonka Bornova Doganlar
Wuxuu ku dhashay Izmir isagoo la kaashanaya Dawladda Hoose ee degmada Bornova 10 kun oo qof oo garoon lagu ciyaaro Doganlar ayaa door muhiim ah ka ciyaaray ciribtirka yaraanta magaalada. Kooxda Kubadda Cagta ee Bornova ayaa martigelisay Super League.
Iyada oo ay dhiseyso heerar UEFA iyada oo lala kaashanayo Degmooyinka Izmir Metropolitan iyo Dawladda Hoose ee Cayaaraha, 15 kun oo qof oo ka mid ah Garoomada Kubadda Cagta ayaa sidoo kale awoodi doona inay martigeliyaan kulamada caalamiga ah. 60 million TL oo ah qiimaha Magaalada Caasimadda ah ee boqolkiiba 75, Boqolkiiba 25 ee garoonnada cusub ee magaaladu waxay la kulantay dawladda hoose ee magaalada Seattle. Tartannada Tiyaasarka ayaa faa'iido weyn u leh kooxaha guryaha oo leh acoustics heer sare ah iyo sidoo kale muuqaal qurxoon.
Hoyga ujeedada badan ee 28
Hoolal isboorti oo ujeeddooyin badan leh ayaa loo sameeyay degmooyinka ku xeeran si loogu faafiyo cayaaraha iyo nashaadaadka dhaqameed ee magaalada oo dhan.
Dooxada 7-kiiloo mitir ee Dooxada, oo lagu qurxiyey balliyada, waxay noqotay jilaa weyn ee dalxiiska dabeecadda.
Gaari la cusbooneysiiyay
Dhismaha xargaha wadooyinka ee Balçova, oo loo xiray dhammeystir iyo dib u dhis lagu sameeyay heerarka Yurub, ayaa dib ula midoobay dadka deggan İzmir xagaaga 2015.
Wadada 7 kun ee 900 km ayaa laamiga dhigay
14.5 xaddiga loo yaqaan "asphalt" ee la isticmaalo sannad walba 13 milyan 560 kun oo tan. Tani waxay u dhigantaa mitirka 7 ballaaran ee 10 sintimitir qaro weyn ah 7 kun 900 kiiloomitir wadada dheer.
Xarunta Wacyigelinta Naafada
Dhibaatooyin soo food saaray dadka naafada ah ee nolol maalmeedka, Wacyigelinta Disability ugu horeysay bulshada ee Xarunta Tababarka ee Turkey si ay u dareemaan iyo qaybaha kale ee Izmir degmada Metropolitan aasaasay.
10 daboolay baarkinka
park ugu horeeyay ee si buuxda iswada dabaq baabuur ee Alsancak baabuurta la dhigto iyo sidoo kale in maamulka maxaliga ah ee Turkey, Hatay Marketplace dabaq Car Park, Atatürk Sports Hall hore ee saamigii la dhigto dhulka hoostiisa, Navy Üçok la dhigto dhulka hoostiisa, Culture dhulka hoostiisa mara Parking Luud, Buca Butcher Square la dhigto dhulka hoostiisa, meelaha baabuurta la dhigto Botanica Degmada Garage iyo Alaybey Multi Storey Car Park ayaa lagu daray İzmir. Gaariga 8 dabaqa sare ee Xatay waxaa la furi doonaa Oktoobar. Dhismeyaasha xadiiqadaha gawaarida ee Yeşilyurt iyo Selvili ayaa la bilaabay. Meelo kala duwan oo magaalada ah, oo ay kujirto mid si buuxda otomaatig ah oo ah nooca xNUMX awoodda xNUMX gawaarida baarkinka xiran ayaa lagu daray.
Mucjisada İzmir ee beeraha
Waayo, markii ugu horeysay ee Turkey gudahood ah "Waaxda Adeegyada Beeraha" iyo sidoo kale sameynta "saarka heshiiska" Turkey ee model ugu horeysay oo ay fulisaa dawladda hoose, wuxuu ahaa degmada Metropolitan Izmir ee. Duqa magaalada Aziz Kocaoglu ayaa ku kala iibsaday iibsigiisa qandaraaskiisa mashruuca "Caanaha Iskuulka" oo ay ku jiraan alaabada sida ubax, saplings, waxyaabaha caanaha laga sameeyo iyo saliida saytuunka. Iibsiga ka yimid iskaashatooyinka iyada oo loo marayo wax soo saar qandaraas ah, iibsiyada laga helo ururada wax soo saareyaasha, taageerada tooska ah ee soosaaraha, taageerada la siinayo iskaashatada soosaarayaasha iyo qolalka beeraha ayaa ka qeyb qaatay TL 900 milyan TL.
Thanks to taageeradan;
- Iskaashiyadii ku xirnaa gobolka ayaa dib u soo noolaaday, qaarkood waxay bilaabeen inay dhoofiyaan.
- İzmir wuxuu gaadhay koror waxsoosaarka beeraha oo aad uga sarreeya celceliska dalka.
- Fursadaha shaqo ayaa la ballaariyey.
- Badeecada waxaa la siiyaa si loo gaaro macaamiisha oo loo helo qiimaheeda.
- 1990 oo daboolaya 2003-14 muddada Izmir beeraha oo ku koraya heerka 9 oo keliya kun sanadkii, 2004-2017 muddadii Duqa Magaalada Kocaoğlu wuxuu la kulmay heerka kobaca ee boqolkiiba 7,5. Oo ay taageerayaan degmada Metropolitan ee Izmir 2,4 beeraha jeer ka badan koray celceliska ah ee Turkey.
- Tallaabooyin ballanqaad ah ayaa la qaaday si looga hortago guuritaanka miyiga una guura magaalooyinka. Tirada dadka ku nool 19, waxaa lagu qeexay “miyiga İzmir ee İzmir, waxaa kordhay 2016 1.59 marka loo eego sanadkii hore. Isla muddadaas heerka koritaanka dadweynaha guud ee boqolkiiba Izmir 1.32, halka heerka korodhka dadka ee Turkey, ku hadhay boqolkiiba 1.35 ah.
Waxa uu u dhacay dalka Turkiga kacay Izmir
Xog kale oo muhiim ah oo taageerta horumarinta reer miyiga ee magaalada waszmir waxay ahayd saamiga shaqaalaysiinta beeraha ee dadweynaha. Sida laga soo xigtay Agaasinka Istanbul ee xogta Shaqada iyo Hay'adda Shaqada, boqolkiiba 2015 20.6 in ratio this sannaddii boqolkiiba 2016 19.5 ee Turkey dhacay. In Izmir, Turkey u kacay inuu boqolkiiba 9.9 10.5 ka heerka of tirada guud ee shaqada beeraha, ka duwan isla muddadaas. Sidaas Turkey ayaa soo sara kacay at heerka of Izmir ee guud.
Saamiga dadka reer miyiga ee İzmir wuxuu ka kordhay 29,14 ilaa 30,70 boqolkiiba.
Caano caano oo ka socda Izmir İzmir
Iyada oo leh “Mashruuca Caanaha Iskuulka X sanadka oo dhan, Magaalada İzmir ee Magaala Weyn, taas oo u saamaxda carruurta inay cabaan caano, waxay bilaabeen mashruuca Milk Lamb ee loogu talagalay carruurta ku jirta da'da da'da 7-1 ee gobollada qoysaska qoysaska dakhligoodu hooseeyo ay ka qaadeen tillaabooyin. Dowladda Hoose ee Magaalada Izmir, 5 oo leh mashruuc baraarug ah oo loogu talagalay kun kun oo carruur ah 130 litir usbuucii. Caanaha la qaybiyey waxaa laga helaa soo-saareha gudaha, Tire Milk Cooperative. Thanks to mashruuca İzmirli qoysaska saboolka ah iyo carruurta la korayaan hab caafimaad by cabo caanaha soo saara caanaha hyphenated, ayaa kor u 2 qadar buuxa adag ee celceliska wax soo saarka ee dalka Turkiga. Wadashaqeeyaasha soo saareyaasha ayaa Qaramada Midoobey loogu magacaabay moodhalka hormarinta tusaalaha hormarinta ee 6.
Ubaxleyaal ubax leh ayaa loo furay suuqyada adduunka
Talaabadan ay qaaday Dowlada Hoose ee Magaalada Izmir, oo door bidday in ay ku taageeraan soosaarayaasha maxalliga ah iyagoo iibsanaya ubaxyadii looga adeegsan jiray muuqaalka hawadda magaalada ee ka socda Bayındır Ubax Iskaashatada, ayaa dib u soo nooleeyay nolosha dhaqaalaha ee gobolka. Thanks to moodalka waxsoosaarka qandaraaska, noocyo kala duwan iyo tayo ayaa kordhay. Ka dib markii uu ka badbaaday qalalaasaha, ubaxleydu hadda waxay u iibisaa ubax dalal badan oo adduunka ah. Xaqiiqdii, shirkadda adduunka ugu weyn ee arintan waxay wadataa mashruuc ay iska kaashanayaan Nederland.
Turkey ayaa la kulmay jidka Caraabaah
Markii ugu horreysay taariikhda dalka iyadoo la maalgashaday waddooyin hooseeya si loo badbaadiyo dhul beereed laga soo qaado Degmooyinka Magaalada Izmir, 2004 tan iyo 6 kun oo 300 km waddo wax soo saar ah ayaa daboolay dusha sare. Xilliga jiilaalka, gaar ahaan waqtiga ugu gaaban in la gaaro dhulka, beeraleyda xagaaga sababta oo ah tayada badeecada ayaa ku dhacay boodh, iyagoo hiigsanaya bannaanka Magaalada Caasimadda ah si ay u gaaraan beeraha si aad u sahlan oo waxay bilaabeen inay ka helaan wax soo saar badan alaabadooda.
Ma jiraan degsiimooyin aan daweyn; laga xoreeyay ciidda iyo biyaha
haysta record daaweynta Turkey ee Izmir Metropolitan degmada Menderes, Gediz, Nif iyo badbaadiyey unugyada Peninsula 22 hormartay dhirta daawaynta biyaha wasakhaysan noolaha ku jira xeedhada webiga by dhismaha iyo dhulka beeraha nijaas. Tayada waxsoosaarka ayaa kordhay, fursadaha suuq geynta ayaa kordhay.
Mashruuca Tuulada Life Life Village
Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir, Urla Bademler'deki Iskaashatada Horumarinta Beeraha ee aagga qiyaastii aaga xanaanada 315, guryaha guryaha, bucshirada waxsoosaarka, oo ay kujirto socodka iyo wadooyinka baaskiil wadida Tuulada Nolosha Dabiiciga ah.
Dhaqaalaha Izmir sidan ayuu u koray
14.5 waxay kordhisay kharashaadka maalgashiga ee İzmir Magaalo Weynta Magaalada 28 jeer; 16.5 ayaa kor u dhaaftay bilyan rodol.
Deymihii hore ayaa la bixiyay 6 bilood kahor qaan-gaarnimada; Laga bilaabo Juun 2012, Izmir wax deyn ah kuma lahayn Khasnada.
Marka mid ka mid ah degmada ugu cafinnaa Turkey ee Izmir degmada Metropolitan, Turkey ayaa maanta ugu awooda badan, waxa uu noqday mid ka mid ah hay'adda ugu kalsoon tahay Turkey ee la maal-sinaanta.
Maalgashiga Dawladda Hoose ee Magaalada Caasimaddeedii sanadkii 2004 waxay ahayd 32 TL, halka 2017, tiradaasi ay kordhaysay 21 times to 675 TL.
Degmada İzmir ee Magaalo Weynaha waxay kordhisay qiimeynteeda Fitch Ratings iyadoo loo yaqaan '9' ilaa AAA (tur), taas oo ah heerka ugu sareeya, iyo Moody's ay kordhisay qiimeyntooda ilaa 18 by Aaa.tr.
Adoo eegaya sanadkii ugu dambeeyay ee 14.5, İzmir Miisaaniyada Dowlada hoose ee Miisaaniyada ayaa kordhay 8.6, halka deyntu korodhay kaliya 1,9. 2004, deynta İzmir Metropolitan Dowlada Hoose waxay hoos ugu dhacday 297 sida ugu hooseysa sida 2017 markii 68 uu ahaa miisaaniyaddiisa.
Izmir, hay'adda cilmi-baarista ee Machadka Brookings ee 2012 “4 dhaqaalaha ugu dhaqsaha badan adduunka. magaalada ”, 2014 ee 2. Magaalada ayaa loo magacaabay.
Degmada Izmir ee Magaalo Weynaha waxaa abaalmarinta la siiyay Plak Plaque of Honor tarafından Golaha Yurub.
Izmir wuxuu ku guulaystay abaalmarinta 'Deegaanka Deegaanka Saaxiibtinimada leh' ee lagu bixiyo Qorshaha Waxqabadka Barnaamijka Deegaanka ee Qaramada Midoobay.
Izmir wuxuu martida sharafta ku ahaa Cities Unbound, oo ay soo qabanqaabiyeen Bangiga Adduunka ee Caalamiga ah (IFC) iyo joornaalka Ingiriiska ee The Economist ee London. Duqa magaalada Izmir Aziz Kocaoglu wareysi uu siiyay majaladda Financial Times ayaa uga warramay hannaanka dhaqaale ee guusha leh ee Izmir.
Duqa magaalada İzmir Aziz Kocaoğlu waxaa loo doortay Başkan Madaxweynaha Bisha Bisha Aralık oo loo yaqaan 'City Mayors Foundation' bishii Diseembar 2012, oo xaruntiisu tahay London iyo qiimeynta mashaariicda degmooyinka iyo badhasaabyada. Aziz Kocaoglu ayaa noqday duqa ugu horeeya ee turkiga ah ee heysta horyaalkan.
Qalcadda degmada bulshada
Muddadii uu ku sugnaa Duqa Magaalada Aziz Kocaoğlu, polzmir Magaalo-Weyne ayaa soo bandhigtay tusaalooyinka ugu guulaha badan ee degmada bulshada mashruucyadeeda iyo codsiyadeeda. Mashaariicda bulshada, dhacdooyinka farshaxanka dadweynaha, adeegyada waxbarashada ku saleysan shaqada ayaa ka dhigtay nolosha dadka Izmir mid qurux badan.
Mashruuca Milk Lambarka
Iyada oo la adeegsanayo Mashruuca Caanaha ee Dawladda Hoose ee Magaalada Izmir, waxay ka iibsataa iskaashi soo-saare oo waxay caano ugu qaybisaa boqolaal xaafadood oo ay ka shaqeeyaan daraasiin kooxo maalin kasta. 1-5 carruurta da'doodu u dhaxayso da'da caanaha bilaashka ah ayaa loo qaadaa guryahooda. 2 wuxuu bilaabay inuu caano u qaybiyo carruurta reer Suuriya sanad ka hor. 132 bin 500 carruurta Izmir waxay cabaan caano caadi ah. Iyada oo mashruucan ilaa hadda la qaybiyey 61 milyan 500 kun oo litir oo caano ah. Soosaarayaasha iyo carruurta labaduba waxay ku dhoola caddaynayaan Izmir,
'Kent Ekmek Fabrikası' waxaa la aasaasay iyada oo ujeeddadiisu tahay taageeridda qoysaska leh fursado dhaqaale oo xaddidan.
maalintii, tobanaan kun oo qoys oo miiska jooga raashin rakhiis ah, oo aan dhammayn oo nadaafad leh ayaa keena.
Cusbitaalka Magaalada İzmir ee Magaalo Weynta Eşrefpa Hospitala, oo ah hay'ad caafimaad oo dhameystiran oo ku qalabeysan tikniyoolajiyad horumarsan, waxay adeegyo caafimaad oo tayo leh siisaa dhammaan qaybaha bulshada.
Intaas waxaa sii dheer, tayada nolosha muwaadiniinta waxaa kordhay sameynta Xarunta Qaabilaada ee Caafimaadka Caafimaad, Alzheimer iyo Dementia Center, Xarunta Caawinta Nolosha Bulshada ee Caafimaadka leh. Daryeel guri ayaa la siiyaa bukaanka u baahan.
Mid ka mid ah tusaalooyinka ugu wanaagsan dhaqanka wada shaqeynta iyo iskaa wax u qabso waxaa lagu muujiyey İzmir. 4.5.6.7, jaamiciyiinta iyo jaamiciyiinta ka qalin-jabiyay jaamacadaha, waxay leeyihiin xaddidan fursadaha magaalooyinka iyo bulshada ee meelaha saboolka ah. Ardaygu wuxuu kaqeyb qaataa mashruucaan tusaalaha ah si uu u siiyo taageero bulsheed carruurta dhigta fasalka.
Dawlada Hoose ee Magaalada İzmir waxay isu keentay qoysas reer magaal ah iyo qoysas u haajiray İzmir oo soo jiidatay ajaanibta nolosha magaalada. Waajibaadka walaalnimo wadaagga ah ayaa la dhisay.
Iyada oo la adeegsanayo Mashruuca Yaş ee Dadka Dhallin-yarada ah ee Proj Project, dadka 60 ee reer İzmir ee u baahan taageerada bulshada waxaa la soo bandhigaa si ay ugu tabarucaan dhalinyarada.
Lagu dhejiyay isbadalka magaalooyinka
"Onsite, cadaalad iyo dib-u-heshiisiin ku-saleysan saldhigeedu yahay magaalada Yüzde wuxuu ka bilowdey Izmir. “Gurigeygu waa cusub yahay, deriskaygu waa isku mid”, shaqada lagu qabtay hal-ku-dhigga ayaa midhihiisii ​​ugu horreeyay ka soo saaray Uzundere. Ka-faa'iideystayaasha guryaha 100 iyo ka-faa'iideystayaasha goobta shaqada ee 100 waxay ka heleen guryo cusub xirmooyinka 9, kaas oo lagu dhammeystirey baaxadda wejigii koowaad ee aagagga ay 280 ku heshiisiisay Mashruuca Isbeddelka Magaalada ee Uzundere. 33 oo daboolaya guryaha 422 iyo goobta ganacsiga 40 ee Mashruuca Beddelka Magaaladda Uzundere. aasaaska masraxa ayaa la dhigay.
Tallaabo talaabo ah “Gacanka dabaasha”
Mashruuca Körfez Great Bay "waxaa loo diyaariyay badbaadinta Izmir Bay. Mashruucan waxaa loo bilaabay in lagu go’aamiyo habka baaritaanka ee marinka loo furi karo xadka waqooyiga ee Gacanka iyo in lagu wareejiyo agabyada la tijaabiyay iyo deegaanka dabiiciga ah. Thanks to maalgelinta daaweynta, tayada biyaha tuubadu waxay bilaabeen inay horumariyaan sanad kasta.
Xeebaha Izmir “Calan Buluug”
International Blue Flag Jury, xeebaha calanka buluuga ah ee Turkey ee 2017 10 ku daray xeebta cusub oo dheeraad ah, taas 10 4 ka dhacay Izmir xeebta. Tirada xeebaha 'buluug-buluug' leh, 12, waxay kordhay boqolkiiba 120 ilaa 51 sanadkii. Doorka ugu weyn ee kororkaan ayaa waxaa ciyaaray unugyada daaweynta qashinka bey'ada horumarsan ee Dowlada Hoose ay hirgalisay. 2018, tirada "buluug buluug ah" xeebaha İzmir wuxuu ahaa 52.
Hogaamiyaha oo daahirinta ee Turkey
Sida laga soo xigtay xogta TUIK ee Izmir, Turkey hayo hoggaanka Midowga Yurub oo sannado badan lacagta daaweynta iyo tirada dadka per capita ee heerarka daaweynta. Midowga Yurub, taas oo uu leeyahay geedka ugu horumarsan daata noolaha daaweynta xarunta daaweynta cudurrada 22 ee Izmir, xaddiga dhicidda daaweynta biyaha wasakhda iyo heerka nadiifiskeeda u ah per capita darajada koowaad ee heerka EU ee Turkey. İzmir sidoo kale waa magaalada kaliya ee degmada in 581, oo u adeegta warshad daaweynta qashinka biyaha, waxay kordhisaa biyaha qashinka ee guryaha boqolkiiba 90 ..
100 14 warshad daaweynta biyaha qashinka noolaha ah ayaa la galiyay iyadoo la maalgalinayo in ka badan milyan ginni. Warshad Daaweynta Bayoolojiga Sare ee Beeraha ayaa la furay. Urla, Bayındır, Menemen, Aliağa, Torbalı, Kemalpaşa, Seferihisar, Ayrancılar –Yazıbaşı, Özdere, Doğanbey-Ürkmez, Yeni Foça, Bayındır Hasköy, Menemen Türkelli, Dhijitaatka cilmiga bayoolajiga iyo xawaashka, wuxuu ahaa badbaadiyey. Howlgalka nadiifintu wuxuu ku socdaa wadarta guud ee daaweynta daaweynta 66.
Dheef-shiidka iyo Dhirta-qallalan
2014, Çiğli Wasakhda Daaweynta Biyaha, oo loo adeegsaday iyada oo la maalgashaday 71 milyan oo rodol oo rodol ah, waxay soo saartaa biogas qaybaha dheefshiidka iyo qallajinta. Noolaha noolaha waxaa loo isticmaalaa halkii gaaska dabiiciga ah ee howlaha qallalan.
Abaabul cagaaran "
Meelaha lagu madadaasho ee waaweyn, kaymaha magaalada, beero nasashada ayaa aasaasay Dawladda Hoose, goob kasta oo yar, xitaa qoddobo la qiimeeyay, geedo 1 milyan oo 700 kun oo geedo ah, geedo 64 milyan oo geed ah ayaa la kulmay ciida. Qaddarka aagga cagaaran ee ku hoos jira dayactirka ayaa dhaaftay 16 milyan mitir murabac. Inciralti, Sasali, kaymaha ugu muhiimsan magaalooyinka Buca Turkey ee Valley Orange loo abuuray. Aagga dhul gariirka ee Kadifekale, deegaanka 46 hektar waa la dumiyey waxaana bedelkeeda kaynta cagaaran ee magaalada ka kooban geedaha gaduudan, geedka looska ah iyo geedaha buluuga ah.
Meelo cusub oo nolosha ah ayaa soo socda
Çiğli Ahmet Taner Kışlalı, Hawada Martyrs, Muzaffer İzgü Park, Neşet Ertaş Park, Karşıyaka Beerta Mavişehir waxaa la furay. Gaziemir Evka -7 Madadaalada iyo Deegaanka Farxada, Konak Agora Park, Harmandalı Creek Edge, Balaavava Adventure, National Parks iyo Dikili Beach iyo Bostanlı 2. marxaladaha xeebaha waa la adeegsan doonaa.
Shimbiraha jannada ololka Flagen
Dawladda Hoose ee Magaalada polzmir waxay cusbooneysiisay 20 kiiloomitir dariiqa dabiiciga ah ee Bird Paradise iyadoo leh qalab gebi ahaanba dabiici ah. Wadooyinka loo qorsheeyay sida baaskiil wadida iyo socodka dheeriga, xero cusub oo kaluumeysiga ayaa laga dhisay aagga mar labaad qalabka dabiiciga ah.
sida aagga kaliya ee hadhay soo saari kari lahaa flamingos ee Turkey Izmir Bird Jannada qabtay oo gasiiraddii joogtay dunida ee saddexaad ee ugu weyn ee flamingos waxaa la abuuray.
Xeebta Izmir waa mid kale oo qurux badan
Dib-u-habeynta xuduuda 40 kiiloomitir ee xeebta laga soo bilaabo Mavişehir illaa İnciraltı Urban Forest ayaa si weyn loo soo gabagabeeyey. Xeebaha Izmir iyo xeebta Izmir marka loo eego shaqada qabanqaabada ayaa heshay muuqaal cusub.
Bedka dhererkiisu yahay 71 kun ee 500 mitir murabac oo ku yaal Wadada Mithatpa isa Highway ayaa loo beddelay barxad weyn oo magaalada ah.
Magaalada Baaskiilka Magaalada Izmir
18 Janaayo X 2014 milyan isticmaal ”xad ayaa laga gaarey nidaamka baaskiil wadista magaalada BİSİM, kaas oo la adeegsaday Janaayo 1,3. BISIM, oo noqoneysa mid sii ballaarata oo leh jidadka baaskiillada ee lagu dhisay xadka 40 kiiloomitir ee u dhexeeya Sahilevleri iyo Mavisehir, ayaa wax badan ka beddelay nolosha Izmir ee leh xarunta 34, baarkinka 735 iyo baaskiillada 500 muddo gaaban gudaheeda.
Warshadda daqiiqda ee 108 ee Halkapınar, oo ay soo celisay Dawladda Hoose ee Magaaladda, waxay u adeegtaa “Warshadda Xirfadleyda .. Dhismaha taariikhiga ah, kaas oo ku yaal Warshadda Mihnadlaha Mihnadda, kaas oo bixiya moodal xal hal-abuur leh oo loogu talagalay dhibaatada shaqo ee magaalada, 75 waxay bixisaa tababar laamaha kala duwan ee waaxda iyo waax-hoosaadyadooda iyadoo lagu saleynayo aqoonta looga baahan yahay suuqa shaqada. “FabLab”, oo gacan ka geysta hal abuurka iyo ganacsi abuurka, ayaa sidoo kale lagu aasaasay gudaha Warshadaha Mihnadda.
Maalgashiga weyn ee taariikhda
Duqa Magaalada Caasimadda Aziz Kocaoglu, qiimayaasha taariikhiga ah ee ilaalinta iyo taageerada muhiimka u ah daahfurka. Dharkii taariikhiga ahaa ee magaalada ayaa dib loo aasaasay iyada oo la dejinayo, dib loo soo celinayo iyo taageero la qodayo oo lagu horumarinayo waaxda dalxiiska, taas oo ah mid ka mid ah waaxaha aagga u ah horumarka maxalliga ah.
Qalalaasaha qodista ayaa taageeraya
Taageerada maaliyadeed ee ay bixisay Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir qodista si loo iftiimiyo hodantinimada taariikhiga ah ee ka sareysa 12 milyan ginni sanadkan. Tan iyo 5, 2012 milyan TL waxaa lagu soo kordhiyey qoditaannada qadiimiga ah.
Masraxa qadiimiga ah ayaa iftiinka
Shaqadu waxay bilaabeen inay soo bandhigaan mashiinka 16-kun ee kursi-qadiimiga ah ee 11.6, oo ku yaal bannaanka Kadifekale oo loo malaynayay inay ka tirsan tahay xilligii Roomaanka. Dowladda Hoose ee Magaalada polzmir waxay bixisay lacag bixinta deynta ah ee 13 milyan oo gini illaa iyo hadda daraasadaha qadiimiga ah. Darbiyada qadiimka ah iyo tiirarka, oo lagu abuuray duminta dhismayaasha qalloocan ee aag qiyaastii ah XNUMX kun oo mitir murabac, waxay kordhisay farxadda hal talaabo oo u dhow shaqada weyn.
Sığacık wuxuu noqday xiddig dalxiis
Iyada oo mashruuca isbeddelka taariikhiga ah uu xaqiiqsaday degmada İzmir ee Magaalo Weyn, guryihii ku yaal Sığacık Kaleiçi ayaa dib loo soo celiyay waxaana la bilaabay isbadal bulsho iyo mid dhaqaale. Noqoshada xiddigta dhalaalaysa ee dalxiiska, Sığacık wuxuu tusaale wanaagsan u noqday horumarka kalkınma maxalliga ah ”.
Kadifekale waa la shiday
Wuxuu shaqooyinka ilaalinta iyo dib u soo celinta darbiyada Kadifekale kula qaatay koox khubaro ah. Berkii hore ee Bizantinen iyo 14 qalcaddii. shaqada dib u soo celinta qarniga ee haray masjidka haray ee Magaalo Weyn, Alexander the Great waxaa dhisay derbiyada Kadifekale oo dhameystiray mashruuca nalalka. Kadifekale, oo ah “taajkii magaalada”, wuxuu bilaabay inuu iskiis isu muujiyo habeenka cirka magaalada.
Ilaaliyaha wadada Roman ee taariikhiga ah
Dawlada Hoose ee Magaalada, Ikiçeşmelik Street ee gobolka halkaas oo ku biireyso Bayramyeri iyo taariikhda Wadada Roman si loo ilaaliyo hadhaagii Roman Way ay ahaato mid ilaalin ah, dib u habeyn loogu sameeyay Cicipark.
Dib u soo celinta oo wax ka beddeleysa wajiga gobolka
Dhismooyin muhiim ah oo ay leeyihiin diimo kala duwan ayaa dib loo soo celiyay. Kabtanka Emirate-ka Sultan, Beith Hillel Synagogue iyo Kaniisada Ayavukla.
Ku biirinta weyn ee dalxiiska Izmir
Aasaasaha Dalxiiska İzmir ee Dalxiiska, oo uu madax u yahay Aziz Kocaoğlu, wuxuu taageeraa kor u qaadista dalxiiska magaalooyinka ee dibadda iyadoo la taageerayo sannadlaha ah ee Dawladda Hoose ee Magaalada.
Maalgashi ballaaran oo ku saabsan dhul-gariirka
Dawlada Hoose ee Magaalada İzmir, oo ah shuraako 2005 ah oo ku taal İzmir Jeotermal A.Ş ee 50, waxay qaadatay doorka hogaaminta ee dib u cusbooneysiinta nidaamka oo dhan ee Balçova iyo Narlıdere iyo bilaabida jiilka korantada shaqadeeda ayaga oo kashifaya ilaha Seferihisar Doğanbey. Muddadii Kocaoğlu, tallaabo ayaa la qaaday si loogu faafiyo dalxiiska illaa 12 iyada oo iskaashi lala sameynayo xarunta daweynta ee Çeşme.
Degmada Badhasaabka Gobolka Minis Kocooglu KarşıyakaMashruuca Tram ee Istanbul ini
Aziz Kocaoglu: IZBAN, shaqada dadka reer Izmir
Degmada Badhasaabka Badbaadada Magaalakda Aziz Kocaoglu ee Tram ee Jarmalka
Aziz Kocaoglu ayaa mar kale rajo ka muujiyay İzmir Metro
Aziz Kocaoglu wuxuu ka hadlay mashaariicda mitrooga iyo taraamka.
Binali Yıldırım iyo Aziz Kocaoglu si ay ula shaqeeyaan IZBAN
Aziz Kocaoğlu waxay u soo bandhigtay Warka wanaagsan ee Buca Tram
Aziz Kocaoglu oo jooga Teleferik
Aziz Kocaoğlu wuxuu ku soo jeeday Mashruuca Calaamadaynta ee Tareenka
Aziz Kocaoglu: Waxaan hirgelin doonnaa mashaariicda aan si sax ah u garanayno iyada oo aan la isku afgaran
Ku martiqaadidda furitaanka metro ee Aziz Kocaoglu
Martiqaad ka yimid Aziz Kocaoğlu ilaa furitaanka Metro
Nidaamka Dhismaha ee Izmir
Balcova Facilities Car Facilities
Iskoolada shabakada nidaamka tareenka
Haddii Tram aan ahayn, Waddada Izmit Maanta Badanaa Badaa
Gaadiidka Dalcık wuxuu Raaci Karaa Karamürsel Gaadiidka